UNICEF Somalia - Media centre - Dowladda Jarmalka ayaa 23 milyan Euro ku biirisey xoojinta nidaamyada caafimaadka ee waqooyiga-bari ee Soomaaliya
A new born baby delivered at the Gambol Mother and Child health centre supported by the German government through KfW Development Bank.
Garoowe, Puntland, 30 Agoosto 2017 – Dad ka badan 2 milyan oo qof oo ku nool Puntland, waqooyiga-bari ee Soomaaliya, ayaa ka faa’iideysan doona adeegyada caafimaad ee lagu sii wanaajiyey taageero deeqsnimo ay ku dheehan tahay oo laga heley iskaashiga hormarinta ee dowladda Jarmalka iyada oo la soo mariyey Bankiga Horumarinta ee KfW.
Mashruuca wadajirka ah ayaa bilowdey bishii Jannaayo 2017ka waxaana uu socon doonaa ilaa dhammaadka sanadka 2019ka. Waxaa uu diiradda saarayaa gobollada Nugaal iyo Mudug oo ay deggan yihiin haween ka badan 250,000 oo da’dii carruur-dhalista ku jira iyo sidoo kale 200,000 oo ah carruur ah oo da’doodu ka hooseyso shan sano jir.
Wasaaradda Iskaashiga Dhaqaale iyo Horumarinta ee Federaalka Jarmalka (BMZ), ayaa bixisey 23,550,000 Euro (ku dhowaad 25.85 milyan oo Doolarka Mareykanka ah) si Dowladda Puntland, UNICEF iyo la-hawlgalayaasha gacan looga siiyo sii wadista hawshii la horey loo bilaabey ee qaybta ka ahayd Barnaamijka Wadajirka ah ee Caafimaadka iyo Nafaqada, ee dhammaadey sanadkii 2016kii.
“Caafimaadka dadka deggan Puntland, gaar ahaan haweenka iyo carruurta, ayaa ah arrin walaac weyn laga qabo in kasta oo sanadihii dhowaa wax xoogaa la sii wanaajiyey adeegyada,” ayaa uu yiri Markus Bollmohr, oo ah Ku-xigeenka Safiirka u fadhiya Soomaaliya oo wakiil ka ahaa Iskaashiga Jarmalka. “Waxaan ku kalsoon nahay in, iskaashiga u dhaxeeya KfW, UNICEF iyo maamulka Puntland, aan is-beddel dhab ah kaga gaari karno dhinaca adeeg-bixinta lagu badbaadinayo nolosha dad badan.”
Mashruuca ayaa ka kooban laba qaybood. Mid waxaa ay taageeri doontaa sii wadista Bixinta xirmada Adeegga Caafimaadka Aasaasiga/Essential Provision of Health Service (EPHS) ah ee ay bixintoodu taageereyso UNICEF oo ah habka ugu weyn oo lagu xoojinayo adeegyada caafimaadka carruurta iyo hooyanimada bedqabka leh. Adeegyadan waxaa ka mid ah tallaalka carruurta; nafaqada; caafimaadka hooyada, taranka, iyo carruurta dhowaan dhashey; duumada (malaariyada), gargaarka degdegga ah iyo daryeelka dadka aad u buka iyo kuwa dhaawaca ah; daaweynta cudurrada degaanka ku badan iyo HIV. Qaybta labaad waxaa ay taageero siineysaa tas-hiilaad iyo bulshooyin ay tiradoodu sii kordheyso. Qaybtan waxaa ay ku lug lahaan doontaa horumarinta kaabayaasha caafimaadka ee muhiimka u ah ballaarinta xarumo takhasusi ah iyo kuwo xaaladaha degdegga ah wax looga qabto oo loo gudbiyo bukaannada iyada oo daraasad arrintan suuragalnimadeeda lagu sameynayo ay haddaba socoto. Mashaariicda dib-u-dhiska iyo dayactirka ayaa la filayaa in ay ka mid ahaan doonaan shan isbitaal degmo, hal waadh (qayb) oo xaaladaha degdegga ah loogu talogaley, 20 xarumo caafimaad ah iyo laba xafiis-goboleed oo laga maamulo arrimaha caafimaadka.
Adeegyada ayaa bixintooda loo marayaa 43 xarumo caafimaad ah (21 ku yaalla Mudug iyo 22 ku yaalla Nugaal) oo ay hawshooda wadaan la-hawlgalayaal hoos yimaada Wasaaradda Caafimaadka ee Puntland. Ilaa hadda muddada sanadkan ka baxdey in ka badan 149,000 carruur ay da’doodu ka yar tahay shan sano jir iyo in ka badan 207,000 bukaann kuwaa ka waaweyn ah ayaa lagu daweeyey tas-hiilaadka la taageerey halka 37,000 haween uur leh ah ay ka faa’iideysteen daryeelka ka horreeya dhalmada waxaana hooyooyinkooda laga umuliyey 11,000 carruur dhashey ah. Waxaa sidoo kale kordhey dhulka la gaarsiiyey tallaalada Pentavalent iyo jadeecada.
“Waxaan si weyn ugu mahadcelineynaa Dowladda Jarmalka iyo KfW taageerada ay bixisey – oo ahayd mid Puntland ay si weyn ugu baahan tahay sii wanaajinta adeegyadeeda caafimaadka – taas oo ah mid hadda oo ay abaari jirto keliya aan loo baahneyn ee loo baahan yahay sanadaha soo socda si loo hubiyo in jiilka soo socda uu ku koro caafimaad-qab iyo xoog,” ayaa uu yiri Wakiilka UNICEF, Steven Lauwerier.